Oohinta Galmada: Dumarka Nuucaan Ah Waa Macaan - Cishqi
Bilowga galmada ama raaxada had iyo jeer waa macaan laakin waxaa ka sii macaan xiliga oohinta galmada gaar ahaan xiliyadaan soo socdo.
Waa sidee oohinta galmada dumarka?
Oohinta galmada, qaasatan xiliga qeylada ay lamaanuhu sameenayaan ayaa ah mararka qaar mid waali ah oo macaan ah, markeey mareyso aah, ooh, waan soo dhawahay, sii wad, please ha joojin.
Marka ay gabadhu ay ku soo degaan jiniyada oo ay bilaawdo xog-xogasho, qaniinyo, ninkuna uu indhaha kor u taago una ekaado sida nin waashay oo kale.
Qish: Dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka siigada badan
Oohinta Galmada Nuucaan Ah Raga waa jecelyihiin
Rag fara badan ayaa xiliyadaan aad u jecel, waxa ayna u sameeysaa dareen lama ilaabaan ah iyo raaxo aad u macaan laakin maxay kuugu taalaa dumarka qaar maba fahansano macaankaas.
Waxa aysan aqoon u laheyn in ragu ay jecelyihiin marka ay dumarka sameeyaan sedex-daan waxyaabood oo ay qormadeenu ku saabsan tahay.
Raaxada Dumarka Waa Macaan Qaasatan Xiliga Oohinta Galmada
In ay raaxada dumarka macaan tahay waxaa og qof walbaa laakin waa kala macaan tahay. Xiliyada ay oohinta galmada bilaabaneyso ma jirto wax ay ragu la meel dhigi karaan, waase hadeey xaasku dareen sameyso.
Maxaa sabab u ah oohinta galmada?
Waxaa jiro sedex waxyaabood oo sabab u ah oohinta galmada dumarka, gaar ahaan markeey biyo baxayaan. Markuu malabyarowga ku dhex mirqo, Goortaan dumarku waxa ay sameeyaan, taah, riin, kaasoo raga qaar waali ku rido.
Dumarku waxa ay u qeybsamaan sedex xiliga galmada
Marka ay jugtu bilaabato qaasatan jugta weyn, dumarku waxa ay kala sameeyaan dareemo nuucaan ah.
Mid weey qeylisaa
Midna weey taahdaa
Mida kalena waa iska aamustaa
Waxaan shaki ku jirin in qeylada ama riinka aanan marnaba la qarin karin, maxaa yeelay waxa ay u yimaadaan si dabiici ah.
Goormee timaadaa qeylada dumarka?
Xaasku waa is diyaarisay, soo qubeysatay misana isa soo carfisay. Waxa ay ninkeeda u xiratay dharka qafiifka ah ee jirkeeda laga arkayo. Guriga waxa ay ay ka dhigtay mid udgoon oo caraf badan.
Qolka jiifka waxa ay ku xirtay leerarka casaanka ah. Hadda waxa ay sugeysaa imaatinka ninkeeda.
Waxa ay ninkeeda weydiisay halka uu ku sugan yahay, maxaa yeelay waxa ay asiga dartii u taagan tahay albaabka iyadoo weliba dareenkeedu kacsan yahay.
Waxa ay u dirtay erayo jaceyl gaar ahaan erayadaan oo kale: Erayo jaceyl ah oo kiciyo dareenka raga.
Ninku wuxuu yimid guriga, isagaoo u riyaaqsan, xaaskuna waa ay ka furtay iyadoo ay ka dhabeysay balan qaadkii ay u sameysay ninkeeda.
Is marxabeyn kadib waxaa bilaabatay ciyaartii la wada sugayay.
Halka ay dumarka raaxada ka helaan
Markuu malabyarowga afkiisa hore uu gaaro meesha loo yaqaano G Spot, halkaas oo ah meesha ay dumarku ay ka helaan raaxo aan caadi ahayn.
Haddii aan tilmaam ka bixino, waxa ay ku taalaa dhakada sare ee xubinta dumarka, gaar ahaan qeybta gudahaha ah.
Ninku markuu meelahaasi ku xoq-xoqo, dumarku raaxo uma dhinno. Waxa ay bilaabaan in ay ninku ku dhegaan oo ay cijeystaan. Haddii ay xaasku xiliyadaas ninka cijeysato, ha iska fahmo in ay hawada sare mareyso.
Mararka qaar waxaa dhacdo in malabyarowga uu gaaro madax labada ukun ee u dhow minka. Halkaas oo ay dumarku ka dareemaan xanuun saaid ah. Ha sameyn taas oo la soco dareenka xaaskaaga.
Haddii aan nahay dumar mararka qaar waxaan dareennaa xanuuno, marka ay xubinteena taranka qalalantahay.
Tani waa qaladaadka ugu badan ee aan sameyno marka aan guurka ku cusub nahay.
Sidee taasi looga gudbaa?
Waxaa jirto Jeel la isticmaalo oo xubinta taranka ka dhigayso mid qoyan, gabadhuna aysan dareemeynin wax xanuun ah.
Raga qaar waxa ay yaqaanaan in ay mariyaan saliid macsaro laakin waxaa ka qurux badan in la mariyo jeelkaan. Haddii aad isticmaasho adigaaba Cishqi.com uga mahadcelin dooono.
Qoraa: Saabiriin Sabnaa – Cishqi Team
Faaiidada Lowska: Ma Xoojiyo Galmada Oo Kaliya